ဖြစ်ပြန်ပြီ ဒီ font — MYSTERY ZILLION
ဖြစ်ပြန်ပြီ ဒီ font
မစန္ဒာလင်းဆိုတဲဲ့ မမ်ဘာတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ပြသာနာပါ အွန်လိုင်းထဲမှာမေးလို့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပေးလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မရဘူးတဲ့ အဲဒါနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို တင်လိုက်တာပါ
Zawgyi Keyboard သွင်းပြီးပြီ ဂျီတော့ ကစာတွေကိုမြင်ရတယ် ရိုက်လို့လည်းရတယ်
ဒါပေမယ့် ဘလော့တို့ ဘာတို့ မှာ သိပ်မမြင်ရဘူးတဲ့ Zawgyi One Font လည်းသွင်းပြီးပြီလို့ပြောပါတယ် သူ့အစားကျွန်တော်ကပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖြေပေးကြပါကုန်
မစန္ဒာလင်းဆိုတဲဲ့ မမ်ဘာတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ပြသာနာပါ အွန်လိုင်းထဲမှာမေးလို့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပေးလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မရဘူးတဲ့ အဲဒါနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို တင်လိုက်တာပါ။ Zawgyi Keyboard သွင်းပြီးပြီ ဂျီတော့ ကစာတွေကိုမြင်ရတယ် ရိုက်လို့လည်းရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့တို့ ဘာတို့ မှာ သိပ်မမြင်ရဘူးတဲ့ Zawgyi One Font လည်းသွင်းပြီးပြီလို့ပြောပါတယ် သူ့အစားကျွန်တော်ကပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖြေပေးကြပါကုန်
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ. Internet Browser ကဘာကိုသုံးတာလဲခင်ဗျ။ Internet Explorer လား။ Firefox လား..စသဖြင့်ပေ့ါဗျာ.. ။ သေချာလေးပြောပြပေးပါလား?
Fire Fox ဆိုရင်
IE Internet Explorer ဆိုရင်
အဆင်ပြေပါစေ.. ကျွန်တော် သိသလောက်ပါ။ အဆင်ပြေ/ မပြေလည် ပြောပါဦး။
MZ က တတ်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ညွှန်ပြပေးကြပါဦးနော်။
ဟုတ်အစ်ကို Noor ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူ့ကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်